Undelete iPad Video: Sida loo Undelete Video ku iPad
> Resource > iPad > Sida loo Undelete Video ku iPad
Tirtiray video on iPad si qalad ah? Waxaa jira laba siyaabood oo aad u si aad u hesho dib: kabsado Lugood gurmad, ama undelete ka laftiisa iPad. Farqiga u dhexeeya waa in aad u baahan tahay in ay gurmad Lugood ah on your computer marka aad la qaato habka ugu horeysay.
Laba siyaabood oo aad ku undelete iPad video
First of dhan, heli ah iPad qalab video undeleting: Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery for Mac) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery for Windows) . Labada barnaamijba ogolaado in aad si toos ah u undelete video baarista iPad ku yaal, iyo Macdan gurmad Lugood on your computer si aad u hesho video soo baxay waxaa ka mid ah. No arrinta habka aad dooratid, ma yeeli doonaa iPad ama gurmad Lugood faylka oo dhan, oo waa mid aad u fudud in ay qabtaan hawsha.
Download ku version DHAGAYSIGA FREE hoose si aad u leeyihiin isku day ah.
Fiiro gaar ah: Hadda, labada qeybood oo kaa caawin kara in video undelete si toos ah uga iPad 1. Sida in lagu daydo kale iPad sida iPad 2, 3 iPad, iPad 4 iyo iPad mini, aad undelete kartaa video via gurmad Lugood.
Next, aynu isku dayaan sidii ay u undelete iPad video la Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Windows) in tallaabooyinka. Users Mac sidoo kale qaadan kartaa si la mid ah.
First of dhan, ordo barnaamijka on your computer ka dib markii ay ku rakibidda. Waxa aad bixisaa laba hababka soo kabashada: kabsado Device macruufka iyo soo kabsado Lugood ee kaabta File. Kaliya dooro mid sare ee interface ka.
Kabsado Device macruufka, waayo, iPad 1
Kabsado Lugood ee kaabta File, waayo, dhammaan iPads
Tallaabada 2. Bilow inaad baarista iPad ama Macdan gurmad Lugood faylka
Kabsado Lugood ee kaabta File: Dhammaan gurmad files Lugood on your computer ku qoran yihiin furmo. Dooro mid aad iPad oo guji "Start Scan" Macdan ka kooban. Haddii ay jiraan wax ka badan hal, ee ka dooro mid ah taariikhda ugu dambeeyay.
Kabsado Device macruufka: Waxaad u baahan tahay in ay ku xidhmaan aad iPad si aad u computer hore, oo ha cararin Lugood. Markaas raac tilmaan-hoose si aad u gasho nidaamka si scan xogta tirtiray waxa on.
Hay iPad iyo tubbada button Start ee interface ee Dr.Fone.
Saxaafadda Power iyo badhamada Home on your iPad waqti isku mid ah ee saxda ah 10 ilbiriqsi. Software tirin doonaa wakhti aad.
Fur button Power isla markiiba 10 ilbiriqsi ka dib, Laakiinse ay xajiyaan riixaya badhanka Home ah.
Marka aad si guul leh ku soo gashay habka, aad sii daayo karaa button Home hadda. Isla mar ahaantaa, barnaamijka la bilaabaa aad ka baareyso iPad si aad u hesho xogta tirtiray ku yaal.
Tallaabada 3. Undelete video ka iPad
Marka scan ka baxayo, waxaad ku eegaan karo helay xogta warbixinta ee ay barnaamijka. Dhab ahaantii, waxaad ku eegaan kartaa dhammaan xogta ku sugan, video ahayn. Wax macno ah ma. Waxaad iyaga ku daawan kartaa ka dib markii iyaga badbaadiya on your computer. Waxaad calaameysaa kuwa aad rabto oo guji bogsadaan. Waxaad undelete kartaa video iPad hadda.
Download ku version DHAGAYSIGA FREE hoos ku leeyihiin isku dayga ah.